√.Healthy mururame zvinhu: akatungamirira Baby Kids Night Light Me toorabbit kubudikidza ABS silicone anopa mate nyoro kubata, Kuti nyoro. Seven Mavara zvinogona kuchinja kuitira kuti vaumbe zvishoma nezvishoma kuchinja color.Through ari nyoro silicone pamusoro, chiedza anotarira nyoro uye kudziya.
√.Long Time Noushamwari: Built-muna 500mAH lithium bhatiri anotsigira inotakurika kushandiswa kumusoro, yellow chiedza Warm kunovhenekera maawa 3 kuda 5. Kuva kugara shamwari yako usiku hwose, Itai yakanaka uye vakazorora atmosphere.Cozy Childrens usiku chiedza adzikamise vana venyu kuti kurara zvakanaka.
√.Sensitive induction: akatungamirira Baby Nursery Lamp Built-munyika itsva vibrating Switch Chip, Zarura nechigadziko simba chinja, The bara kutanga chena chiedza Warm (chiedza simba), The urove wechipiri newechitatu-ruvara matanhatu ruvara-kuchinja nzira, urove anogara inopenya, Dzima chiedza nokuda nguva wechina, Pat zvakare, rambi kuuya nzira.
√.Correct mashandiro: Mumwe kutonga zvizere (5V / 1a) Zvinotora anenge 2 maawa. Kana uchiraira, dzvuku chakarurama ichivhenekera kumusoro, uchiraira Anopedzisa, girini chakarurama chiedza.
√.Usage muenzaniso: The akatungamirira Baby Nursery mwenje Rinogona kushandiswa vana yokurara usiku zviedza, asi kunogonawo sezvo chevana parutivi pomubhedha chiedza, mwana chitoyi marambi, vana yokurara decoration.Powered nechinhu Namano USB pachiteshi, akadai kombiyuta yako, pakombiyuta , Laptop, simba bhengi.
EXW Price: US $ 6.77- $ 7.22 / zvidimbu
Battery Type Akavaka-muna 500mAh Li-Ion bhatiri
ndinorova nguva 2 maawa
Working Time maawa 8-20 (kunobva Kupenya)
shanda 1.7 Color Kuchinja
kavha 1pcs / bhokisi, 48pcs / atorwa
Perfect Gift Valentine Day / Christmas / New Year Muputi, shamwari, vabereki, vana
USB ndinorova wire Ehe
Color bhokisi (mm) 105 * 115 * 135
Atorwa bhokisi (cm) 59 * 49 30 (16.5kg / Ctn)
Next: Micro Plant Landscape usiku chiedza PJS-TW-L18
80W akatungamirira Oliver Corn Light
100W akatungamirira Corn Light
15W akatungamirira Corn Light
Paraffin Flats makenduru PJS-L003
Motion Switch Night Light PJS-UFO